Mabasa - Prairie State Legal Services
Prairie State Legal Services Inzvimbo Yakakura yekushandira
Tinotenda kufarira kwako semunhu anotarisira kuve mushandi. Kana iwe uri kutsvaga kuti uite semunhu anozvipira kana shamwari, shanyira Pro Bono / Vazvipiri kana Kushamwaridzana.
Prairie State Legal Services isangano rine simba uye rinoremekedzwa zvikuru rezvemitemo. Yakavambwa muna 1977, Prairie State ine nhoroondo inodada yekupa emhando yepamusoro masevhisi emutemo kune vanoshaya vatengi. Isu tinoshandira makumi matatu nenhanhatu matunhu kuchamhembe nepakati Illinois. Kuti tive nechokwadi chekuti tiri kuwanikwa uye neruzivo nezvenharaunda dzatinoshandira, tinoshandisa mahofisi gumi nerimwe, ane nzvimbo muBloomington, Galesburg, Joliet, Kankakee, McHenry (Woodstock), Ottawa, Peoria, Rockford, Rock Island, Waukegan, neWest Suburban. .
Iwe uchave nemukana wekuita mutsauko.
Kune nzvimbo dzakasiyana siyana, asi vese vamiriri vedu vanogona kutarisira kuve nechekuita mune zvinotevera zviitiko:
Kuitisa kubvunzurudza kwekudya nevatengi, kutora chikamu mumisangano yekugashira nyaya uye kuronga zviitiko.
Kupa rairo yezvemutemo, masevhisi mapfupi kana kumiririra kwakawedzerwa, kusanganisira kutaurirana nemapato anopokana uye magweta uye kumhan'ara pamatanho ese pamberi pematare ehurumende nematare emubatanidzwa uye pamberi pevamiriri vehutongi.
Kupa kurwira kwakananga kunogadzirisa matambudziko ehurongwa, kusanganisira kukakavara, pamwe nemutemo kana hutongi hwekukurudzira, pazvinenge zvakakodzera.
Kutora chikamu muchirongwa-chakakora kana chenyika-chakakura mauto emauto uye / kana mapoka anoshanda anotarisana nenzvimbo dzakasarudzika dzemutemo.
Kubata munharaunda dzidzo yemutemo.
Kushanda nemapoka enharaunda nemasangano enharaunda kuti vagadzirise zvinodiwa nevatengi uye kuchengetedza kodzero dzavo dzepamutemo.
Iwe uchagamuchira yemhando rutsigiro uye kudzidziswa.
Kununura mhando dzemhando yepamusoro mabasa anotanga nevamiriri vane hunyanzvi. Iwe unozowana ruzivo nevatengi uye mudare redzimhosva, uye paunenge uchikudziridza hunyanzvi uchagamuchira tarisiro kubva kune vane ruzivo magweta uye maDirector e Litigation. Iwe unozogashira yakanakisa kudzidziswa, uye mikana mizhinji yekudzidzira inowanikwa mwedzi wega wega. Vachangobva kubvumidzwa magweta vanogashira yakadzika Basic Litigation Skills Kudzidziswa.
Uchave uri chikamu chevanhu.
Iwe zvakare uchave nebhenefiti yekushandira sangano rine zvese zvakanakira hombe yemutemo femu nehukama uye nekukasira kwekambani kadiki. Iwe unenge uri chikamu cheboka rakasarudzwa uye rakabatana. Mahofisi edu akaenzana pakukura kubva kumagweta matatu kusvika masere, nevashandi vakatsigira. Asi, rimwe nerimwe remahofisi edu akasungirwa kune mumwe neumwe nechinangwa chakafanana uye kuzvipira kune misimboti yeruramisiro yakaenzana.
Isu takazvipira kukwezva nekuchengetedza nyanzvi dzakatsaurirwa kuita basa redu, uye tinoedza kupa mushandi anoshanda mushandi. Isu tinopa yakasarudzika mabhenefiti package inosanganisira:
Hutano Inishuwarenzi (inosanganisira mazino uye maonero mabhenefiti)
Rupo Rinobhadharwa Nguva Yakabviswa (inosanganisira zororo revabereki)
Mamwe maBasa Zvirongwa (kusanganisira anoshanduka maawa ekushanda, maawa ekushanda-wenguva, uye telecommuting)
Flexible Spending Accounts (kusanganisira zvekurapa uye zvekuchengetedza)
Ipfupi uye Yakareba Yekuremara Inishuwarenzi
403 (b) Chirongwa Chekuchengetedza Mari
Unyanzvi Hwehunyanzvi uye Bar Association Dhizi
Nyanzvi Yekusimudzira Rutsigiro
Magweta eKupembera kweJustice, Chikunguru 14
Job Opportunities, Mukana waJobho
Nyanzvi Yekupa Yepagore
Kuwana Kururamisira - Gweta reVashandi
Gweta reVashandi - Kuwana Kururamisira (A2J) Project
Galesburg, Job Opportunities
Community Advocate – Ruramisiro, Kuenzana uye Mukana Chirongwa
Paralegal – Kodzero dzevakuru
Gweta revashandi veMhirizhonga yemumba
Staff Gweta - Dzimba Dzemhirizhonga Vanotambura Mabasa
Mukuru Justice Staff Gweta